फ्लोरोसेंट लम्ब आफैको सट्टा एक एलईडी लम्ब कसरी जडान गर्ने?
एक पटक, फ्लोरोसेंट लैंपलाई एक वास्तविक सफलता मानिन्छ - तिनीहरूले स्कूल, अस्पताल, किबोर्डगर्टन्स, अन्य संस्थाहरू, र यहाँ केहि अपार्टमेन्टहरूमा देखा पर्न सक्थे। तर भर्खरै उनीहरूको मनोवृत्ति अस्पष्ट भएको छ। एकै ओर, उनि कम बिजुली को खपत, लामो जीवन र उच्च प्रकाश दक्षता द्वारा विशेषता हो। तर यी सबै सकारात्मक गुणहरू उनीहरूको मुख्य कमजोरीबाट फर्काउँथे - फ्लोरोसेंट लैंपमा पाराले भरिएको फ्लास्क समावेश गर्दछ।
एलईडी लैंप को आविष्कार संग, अब अब आफैं को खतरे को खतरे को लागी कुनै पनि आवश्यकता को आवश्यकता छैन, खासकर जब देखि यस्तो लैंप उनको विशेषताहरु मा luminescent लैंप को अधिक भन्दा बेहतर हो।
तर जब हामी पहिले अप्रचलित फ्लोरोसेंट लैंप को प्रतिस्थापन को बारे मा सोचते हो, हामी यस प्रश्न को सामना गर्दैछन: कम से कम सामाग्री लागतहरु संग यो गर्न को लागी, किनकी एलईडी लैंप को लागत एकदम अधिक छ, र एक पूर्ण प्रतिस्थापन हामिलाई एक सारांश राशि खर्च हुनेछ। यो केवल लैंपहरू प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ, खास गरी देखि यो यदि तपाइँ केहि विशेषताहरू थाहा छ भने यो गर्न सजिलो छ। त्यसोभए, फ्लोरोसेंट लम्ब आफैको सट्टामा एक एलईडी लाइट कसरी जडान गर्ने भनेर हेर्नुस्।
एलईडी लैंपको निर्माताले लामो समयसम्म हाम्रो टाइबलर एलईडी लैंप टी 8 जारी गर्दै आएको छ, सोल G13 को लागि उपयुक्त। यो केवल थोपा पुरानो लैंप बदल्नको लागि बनी रहन्छ। यो गर्नका लागि, तपाइँ तारिण रेखाचित्रबाट सबै अनावश्यक घटकहरू हटाउनुपर्दछ।
चलो हेर्नुहोस् कि कसरी चार लुमेनियन्स ट्यूबहरु संग एक मानक रास्टर लिमिनिटर सर्किट मा fluorescent को बजाय एलईडी दीपक जोडने, जो अक्सर हुन्छ - बलुआ र एक स्टार्टर संग।
फ्लोरोसेंट लैंपका लागि जडान योजना
LDS luminaires अतिरिक्त उपकरण छ जुन तिनीहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक छ। यी थपिहरूको एलईडी लैंपहरू आवश्यक पर्दैन: सामान्य कार्यको लागि सबै आवश्यक आवश्यक नै पहिले नै मामलामा बनाइएको छ। यसैले, फ्लोरोसेंट लैंपको सट्टा एलईडी दीपक जडान गर्नु अघि, यो सबै अनावश्यक र चार्जलाई सिधै सम्पर्कहरू हटाउन आवश्यक छ।
लुम्मिनायर को दुवै कोटिहरु लाई त्यहि तरिका मा जोड दिए गए हो: हरी कंडक्टर तटस्थ तार संग जुडा छ, र लाल एक चरण मा जोडिएको छ। तल, आरेखले कसरी फ्लोरोसेंट लैंपको सट्टा एक एलईडी लाइट जडान गर्न सकिन्छ।
एलईडी लैंपका लागि जडान योजना
यो गर्न यो एकदम सजिलो छ - एक चरणको लम्बाइको एक छेउमा, अर्को - शून्यमा जडान हुनुपर्छ। ध्रुवीकरणलाई आवश्यक छैन, किनकि वैकल्पिक वैकल्पिकबाट पाउँछ। तार आफैलाई कुनै सम्पर्क पिनहरूसँग जोड्न सकिन्छ, किनभने एलईडी लाइटको एक पक्षमा सम्पर्कहरूको प्रत्येक जोडा एक-अर्को बन्द हुन्छ।
एक रेस्टर फ्लोरोसेंट लैंपको रातोपन
एलईडी दीपक जडान गर्नु अघि, G13 आधारबाट आउने सबै तारहरू काट्न आवश्यक छ। त्यस पछि, यो टर्म टर्मिनलहरूमा एक छेउमा केबल जडान गर्न पर्याप्त छ, र अर्कोतिर शून्यमा।
एलईडी लैंपको प्रकार
बिक्रीमा यूक्रेनमा उत्पादन गरिएको एलईडी लैंप फेला पार्न धेरै दुर्लभ छ, जसमा सम्पर्क पिनहरू र शून्य एक पक्षमा छन्। यस्तो लैंप जडान गर्नु अघि, यो पहिला लम्बाइमा संकेत गरिएका जडान पक्षहरूको जाँच गर्न जरूरी छ। स्थापना प्रक्रिया आफैलाई दुई-पक्षीय सम्पर्क लैंपको रूपमा समान हुनेछ।
क्रिस्टलहरूमा आधारित एलईडी लैंपहरू कसरी जडान गर्ने
यस्तो लैंपहरू चिप्स जोड्नको लागी अतिरिक्त उपकरणहरू चाहिन्छ:
ट्रांसफरर 12 वा 24 वा।
यी स्थिर उपकरणहरू मध्ये कुनै पनि आफ्नैमा इकट्ठा गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि यो निश्चित ज्ञान र समयको पर्याप्त मात्रा आवश्यक छ।
एलईडीहरू, एलईडी तत्वहरू र एलईडी स्ट्रिपहरू जडान गर्न सामान्यतया अतिरिक्त स्थिर यन्त्रहरू आवश्यक छन्। एलईडी लैंपहरू प्रायः निर्मित निर्मित स्थिरताहरू छन्।
हामी यो लेखमा जडानको लागी यन्त्रहरू स्थिर गर्न एकत्रित गर्ने तरिकाहरूमा विचार गर्नेछौं, किनकि यो स्वतन्त्र रूपमा यो सिक्न गाह्रो छ। यदि तपाइँसँग विद्युत ईन्जिनियरिङ्को कुनै ज्ञान छैन भने, त्यसो भए अघि प्याकेजिङ्ग अध्ययन गर्न पक्का हुनुहोस् - यो सामान्यतया संकेत गरिएको छ कि जडानको लागि थप उपकरण आवश्यक छ कि?
रोशनीसँग स्विच गर्दछ
यस्तो स्विचहरू प्रयोग गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, तर प्रायः आधुनिक लैंपसँग जोडिएको छैन। तिनीहरू सबैभन्दा छिमेकी लम्बाईको लागि उपयुक्त छन्। तिनीहरूको पछाडि यो कि एलईडी लाइट अँध्यारोमा कहिलेकाहीँ फ्लैश गर्न सक्छ, जुन धेरै सजिलो छैन, खास गरी बेडरूममा।
यो तथ्यको कारण हो कि यस्तो luminaires को व्यवस्था मा एक संशोधन हो जो वैकल्पिक वोल्टेज को निरंतर एक मा कनवर्ट गर्दछ। लहर बाहिर सुचारु गर्न, एक संधारित्र रिसेप्टरमा बनाइएको छ, जसमा लुमनायरको सञ्चालनको समयमा चार्ज संकलन गर्ने सम्पत्ति छ।
यसैले, जब एलईडी दीपक एक हल्का स्विच संग जोडिएको छ, यसले घडी को चमक गर्छ, र कहिलेकाहीं यो बन्द हुँदा पनि फ्लिकरहरू। यसको समाधान गर्न थुप्रै तरिकाहरू छन्:
स्विचबाट लाइट हटाउनुहोस्;
तारिख जाँच गर्नुहोस् सही छ;
पारम्परिक चम्किलो लम्बाइ ताकि हालैको माध्यम ले नापने वाला पारित हुन्छ, तर दादी को माध्यम ले;
समानांतर एक शंट अवरोध छ त्यसो कि संधारित्र चार्ज संकलन गर्दैन;
विशेष रूपमा ब्याकलाइटको साथ डिजाइनको लागि डिजाइन गरिएको एलईडी लैंप प्रयोग गर्नुहोस्, तर यसलाई मनपर्ने हुनुपर्दछ कि यस्ता लैंप लामो समयसम्म फ्रिज गरिन्छ र उच्च लागत छ।
जब तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, फ्लोरोसेंट लैंपको सट्टा एक एलईडी लाइट जडान गर्नु अघि, तपाईंलाई पूर्ण रूपमा रोशनीहरू परिवर्तन गर्न वा बढी ज्ञान आवश्यक छैन। यो सजिलै संग न्यूनतम लागत संग, सजिलै संग निर्देशनहरू पछ्याउन सकिन्छ।
यी सरल परिवर्तन पछि, तपाईं कम ऊर्जा खपत संग आधुनिक लैंप हुनेछ, एक लामो सेवा जीवन छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - सुरक्षित।
नबिर्सनुहोस् कि फ्लोरोसेंट लैंपहरू मात्र पारा हुन सक्दैन किनभने तिनीहरू पारा हुन्छन्। सबै माध्यमद्वारा तिनीहरूलाई निषेध गर्न निश्चित हुनुहोस्। लगभग सबै प्रमुख शहरहरु छन् कि खतरनाक अपशिष्ट को निपटान संग फर्महरु, धेरै को लागि लैंप को नि: शुल्क मुक्त स्वीकार गर्न को लागि तयार हुनेछ।
एलईडी लैंप को बारे मा दिलचस्प तथ्यहरु
सेतो एलईडीहरू अवस्थित छैनन्। तिनीहरू निलो विशेष पदार्थ - फास्फोरमा छिराएर प्राप्त गरिन्छ ।
ब्लू एलईडी शरीर द्वारा melatonin को उत्पादन को कम, जो कमी को अन्त को अन्त सम्म आराम को अनुमति दिदैन।
एलईडीहरूको नीलो रंगले नकारात्मक रूपमा केही खाद्य उत्पादनलाई असर गर्छ, उदाहरणका लागि, दूध, अपारदर्शी प्याकेजिङको माध्यमबाट यसको स्वाद गुणहरू परिवर्तन गर्दछ।
एलईडीहरूको पलशनले शहरमा जनावर र पक्षीहरूको आबादीको संख्या घटाउँछ।
देशमा बैरल कसरी रंग्न भनेर कुरा गरौं
तालिका शीर्षको लागि एपिओक्स राल। तपाईंको हातले तालिका तालिका कसरी बनाउने?
कसरी कालीनको हेरविचार गर्ने
घरमा आफ्नै हातले आफैलाई लुकाउनुहोस्: कसरी गर्ने?
उपकरणको मोनसोइनको लागि झार
इन्जिन VAZ 2106 डिजाइन सुविधाहरू, वर्णन, मरम्मत
कविता कस्तो विश्लेषण "म सम्झना एक अद्भुत क्षण"?
उत्कृष्ट स्टार्टर: छम रोल
शिक्षा को गुणस्तर। शिक्षा प्रणाली गुणस्तर आकलन